Misoro yenhau, Muvhuro, Gunyana 6, 2021
Bazi rezvehutano rinoti vanhu gumi nevatanhatu vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro.
Zvikoro zvovhurwa vamwe vana vachidzingwa nekushaya mari iri kudiwa kuti vatange kudzidza.
Vesangano rePassengers Association of Zimbabwe nevamwe vobatana neZimbabwe Human Rights NGO Forum mukuendesa gurukota rezvemukati menyika, mukuru wemapurisa VaGodwin Matanga nevamwe kumatare nenyaya yekumanikidza vanhu kuti vakwire mabhazi eZUPCO vachisunga vanokwira mimwe michovha.
Imwe nyanzvi mune zvehutano yokurudzira hurumende kugadzirisa nechimbichimbi dambudziko rechekufambisa ichiti kukundikana kwekambani yeZUPCO kutakura vanhu kuri kukonzera kuungana kwevanhu pamisika yemabhazi, izvo zviri kuzoisa vanhu munjodzi huru sezvo kuchiita kuti vanhu vatapurirane hutachiwana hunokonzera chirwere cheCovid-19 zviri nyore.
Vamwe vatsigiri vechikwata chenhabvu chemaWarriors vanoti havana chivimbo chekuti chikwata ichi chichakunda Ethiopia mumutambo we22 World Cup mangwana. Mugungano rin Zimbabwe, Ghana iri kutamba neSouth Africa nhasi.
Muchirongwa cheLive Talk na8pm nhasi, tiri kutarisa nyaya yechirwere cheCovid-19 apo zvikoro zvovhurwa vanhu vachinetsekawo nekushaya mabhazi ekufambisa sezvo ZUPCO iri kutatarika kuita basa rayakanzi iyo yoga iite.